Wasaaradda Kheyraadka Badda: Ma jiro heshiis badeed lala galay Kenya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasaaradda Kheyraadka Badda: Ma jiro heshiis badeed lala galay Kenya
Mareeg.com: Wasiirka Kalluumeysiga iyo Kheyraadka badda Soomaaliya, Maxamud Colow Barrow ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar la isla dhexmarayay oo ku aadanaa heshiis dhinaca soohdinta badda Soomaaliya oo la sheegay in dowladdu ay la saxiixatay dhinacyo kale.
Wasiirka ayaa ku tilmaamay shakhsiyaadka Wararkaasi faafinaya in ay yihiin kuwo ka soo horjeeda in Soomaalida ay ka faa’ideestaan Kheyraadka Badda.
Wasiirka Wasaradda kalluumaysiga iyo Kheyraadka badda ee Xukuumadda Feredaralka Soomaaliya Maxam’ud Calow Barrow oo shir jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa ayaa xusay in aytahay mid been abuur ah wararka tilmaamaya in dowladdu ay heshiis la gashay dowladda Kenya ee dhanka badda ku saabsan.
Dhawaan ayaa warbaahintu heshay warqad madaxweynaha Soomaaliya u dirqay Qaramada Midoobay, taasoo uu ku sheegay in Soomaaliya diyaar u tahay iney wadahadal la gasho cid kasta oo muran xagga badda ah kala dhaxeeyo.
Muungaab: Alshabaab ma joogaan Muqdisho ee waxaa jooga kuwa u eg
Sideed ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay jidka isku xira Burtinle iyo Garowe